एमाले अनुशासन आयोग प्रमुख बोहोराको ओलीलाई पत्र : भोली बोलाएको समितिको बैठक तत्काल स्थगित गर्न माग – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > एमाले अनुशासन आयोग प्रमुख बोहोराको ओलीलाई पत्र : भोली बोलाएको समितिको बैठक तत्काल स्थगित गर्न माग
५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । एमालेको नेपाल र खनाल पक्षले सोमबारका लागि बोलाएको आयोजक समितिको बैठक तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । नेपाल खनाल पक्षका नेता तथा एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका अमृतकुमार बोहोराले आइतबार विशेष ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै यस्तो आग्रह गर्नु भएको छ ।
बर्तमान अवस्थामा बिग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोज्नुपर्नेमा उल्टै २०७८ बैशाख ६ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिँदैछ । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनैपनि निर्णय गर्नुहुँदैन । पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ’, बोहोराले भनेका छन् । त्यस्तै बोहोराले सवै पक्षलाई आग्रह गर्दै भनेका छन, –‘मेरो गोरुको बाह्रै टुक्का भन्ने नेपाली उखान जस्तो ढिपी कसैले नगरौँ । पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउन एउटा पक्षमात्र सामेल भएर गरेको २०७७ फागुन २८ गतेको एकतर्फी निर्णयलाई विनाशर्त फिर्ता गरौँ ।
‘ओ माई लर्ड’को साथमा आए गरिमा र भिम ( भिडियो )
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल ५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१०
सम्झनामा जेठ ३ ५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१०
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? ५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१०
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव ५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१०
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ५ बैशाख २०७८, आईतवार १७:१०